Knowledge – Wun Yan
တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမကို အသာစီး ရချင်တယ် ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမအပေါ် သဘောထားကြီး အလျှော့ပေးတတ်တယ်
တုံးအတဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားတုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမကို အသာစီးရချင်တယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမအပေါ် သဘောထားကြီး အလျှော့ပေးတတ်တယ်…တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမရဲ့အားနည်းချက်တွေကို မြင်တိုင်း စိတ်ပျက်လွယ်တယ်။ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမရဲ့ အရည်အချင်းကို ရှာကြံ အသိအမှတ်ပြု ချီးမွမ်းတတ်တယ်…တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမနဲ့ အချိန်နေရာ မခွဲဘဲ ငြင်းခုံ ရန်ဖြစ်တယ်။ လူပုံအလယ်မှာ မိန်းမကို မျက်နှာသာ မဲ့စေ တယ်…ထက်မြတ်တဲ့…
ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ ဘုရားပုံတော်တွေ၊ ဘုရားစာအုပ်တွေကို စွန့်ပစ်ဖို့ စိတ်ထဲ မရှင်းမလင်း ဖြစ်နေသူများအတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း
ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ ဘုရားပုံတော်တွေ၊ ဘုရားစာအုပ်တွေကို စွန့်ပစ်ဖို့ စိတ်ထဲ မရှင်းမလင်း ဖြစ်နေသူများအတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း မြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာထားပြီး ပူဇော်ခဲ့တဲ့ ဘုရားပုံတော်တွေ ဘုရားစာအုပ်တွေ ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြဲသွားလို့ စွန့်ပစ်ရတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာမှာစွန့်ပစ်ရင် သင့်တော်မလဲဆိုတာကို စိတ်ထဲ ဇဝေဇဝါနဲ့ ဆုံးဖြတ်မရ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မစွန့်ပစ်ရက်လို့ စုထားပြန်ရင်လည်း တဖြည်းဖြည်းများလာပြီး ထားစရာနေရာက အခက်အခဲရှိလာပြန်တယ်။ ဒီတော့ မဖြစ်မနေ စွန့်ပစ်ရတော့မယ် ဆိုပြန်ရင်လည်း မသင့်တော်တဲ့ နေရာမှာ…
ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်ကြီး၏ အဖိုးတန်သော အဖြေများ ”အမျိုးသမီးများရဲ့ ထဘီတန်းအောက်ကို ဝင်ရင် ဘုန်း နိမ့်ပါသလား ဘုရား”” ”နိမ့်တယ်ထင်ရင် နိမ့်ပါတယ်။ မနိမ့်ဘူးထင်ရင် မနိမ့်ပါဘူး” ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ထဘီကြောင့် နိမ့်တာမဟုတ်ပဲ ”ထင်”ဆိုတဲ့ ဥပါဒါန်ကြောင့်သာ နိမ့်သွားတယ်လို့ ထင်တာပါ။ ပိတ်စတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့ ထဘီလို နူးညံ့တဲ့ပိတ်စတစ်ခုဟာ သင့်ကို ဘယ်လိုများ ဒုက္ခ ရောက်စေမလဲ။ ဘုန်း နိမ့်တယ်ဆိုတာက သင်ထင်သလို မဟုတ်ပြန်…
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ဗဟိုအရပ်သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ မြစ်သားနယ်၊ ကူမဲမြို့မှ အရှေ့ဘက် ၇ မိုင် ၇ ဖာလုံခန့်မှ ‘မြသုခ’ကျေးရွာအနီးရှိ ပြက္ခရွေတောင်ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ကမ္ဘာ့တည်နေရာပြစနစ် (GPS) တိုင်းတာချက်အရ မြောက်လတ္တီတွဒ်၂၁ ဒီဂရီ ၁၂.၆၉၅ မိနစ်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၄.၇၅၉ မိနစ်တွင် တည်ရှိသည်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က မြေတိုင်းဋ္ဌာနမှ တိုင်းတာထားသော မြန်မာနိုင်ငံအလယ် ဗဟိုချက်မ အုတ်ပန္နက်တိုင်…
ကံ‌ကာင်းချင်တယ် ဆိုရင် ကျင့်ကြံ နေထိုင်ရမည့် နည်းလမ်းများ
ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲ ကိုယ့်စိတ်ကို နှစ်ထားပါ သင့်မှာရှိတာ ပစ္စုပ္ပန်တခုထဲ ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ အတိတ်ဆိုတာ ပြီးသွားပြီ … ။ အနာဂတ်ဆိုတာ မရေရာတာတွေနဲ့ မရောက်လာသေးပါဘူး …. ။ သင့်လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မှ သင့်ဘဝကို ပြောင်း လဲနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် … ။ တပါးသူကို မေတ္တာထားပါ အများအကျိုးရှိမှာလုပ်ပါ …. ။ ကိုယ်တယောက်ထဲ ကောင်းစားသွားမယ့် လမ်းမရွေးပါနဲ့…
တစ်နေ့သ၌ နိုင်ငံခြားမှ သူဌေးကြီး တစ်ဦးသည် ကျေးရွာ တစ်ရွာကို ဖြတ်သွားစဉ် ရေဆာသဖြင့်
အလှူဒါန မွဲကြသူမှာ တစ်နေ့သ၌ နိုင်ငံခြားမှ သူဌေးကြီးတစ်ဦးသည် ကျေးရွာတစ်ရွာကိုဖြတ်သွားစဉ် ရေဆာသဖြင့် စာသင် ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းရှေ့တွင် ကားကိုရပ်လိုက်သည်။ သူက ကျောင်းထဲကို ဝင်ပြီး လက်ဟန်ခြေဟန်နှင့် ရေသောက်ချင်ကြောင်း ပြောသည်။ ကလေးတွေက သူ့ကို ရေအိုးစင်ဆီသို့ခေါ်သွားသည်။ သူဌေးကြီးက ရေအိုးစင်မှရေကို ခပ်သောက်ရန်ပြင်သည်။ ရေတွေက နောက်ပြီး ပူနေသည်။ သူက နောက်မှ ပါလာသူကို “သူတို့ ဒီလိုရေတွေပဲသောက်သလား” “ဟုတ်တယ် ……
ခွေးကျွေးခြင်း၏ ကုသိုလ်အကျိုး သေချာဖတ်ကြည့်နော်
ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ခွေးကျွေးတဲ့အလုပ်ကလေးကိုတော့ ၀တ်တစ်ခုလိုကိုထားပြီး လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေဆို လမ်းပေါ်မှာခွေးပိန်ကလေးတွေ တွေ့ရရင်တောင် နီးစပ်ရာမုန့်ဆိုင်က၀ယ်ပြီး ကျွေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ ဒီခွေးကျွေးတာနှင့် ပတ်သက်ပြီး သူငယ်ချင်းကမေးခွန်းတစ်ခု မေးလာပါတယ်။ “တနင်္လာနံမို့ ခွေးကျွေးတာလား” တဲ့။ မိမိက “တနင်္လာနံ ဆိုတာ ဘာလဲ” လို့ ပြန်မေးတော့ သူငယ်ချင်းက “ငွေနံလေ” တဲ့။ ဒီတော့မှ မိမိလည်းသဘောပေါက်သွားပြီး “တနင်္လာနံကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူး။ သီဟိုဠ်၀တ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ဖူးထားလို့ပါ”…
ရှိလို့လှူ .. လှူလို့ရှိ … ရှိပြီးရင်း ရှိ … ဆိုသော မြန်မာလူမျိူး များသည် ဒါန ၏ အကျိူးကိုလည်း ယုံကြည်သူများပင် ဖြစ်ပေသည်။အမျိူးမျိုး အဖုံဖုံသော နည်းများဖြင့်် နည်းများဖြင့် အလှုဒါန ပြု့လေ့ရှိကြသည်။ သို့သော် .. မြတ်စွာဘုရား အား လှုသော အလှူသည်ကား လောကတွင် အမြတ်ဆုံး အလှူဖြစ်သည်။ထို အလှုဒါန ၏ အကျိူးကား…
နေ့စဉ်ပဌာန်း အရှည်ကြီး ကို မရွတ်နိုင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ အတွက် ထူးခြားတဲ့ ပဌာန်းဆုတောင်း
ပဌာန်းအကျယ် မရွတ်နိုင်တဲ့ နေ့တွေမှာ သရဏဂုံသုံးပါးနှင့် ငါးပါးသီလ စောင့်တည် ပြီး ဒါလေးကို ရွတ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အရမ်း အချိန်ပေးစရာမလိုဘဲ မြတ်စွာဘုရားရှင် ပဌာန်းဒေသနာတော်အား ဆုတောင်းနည်းပါ ။ လူအများနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ သင့်ကို လက်ခံဖို့ ချစ်ခင်ဖို့ ဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်- မလိုအပ်ဘူးထင်ပြီး သင့် ရဲ့ဆက်ဆံပုံ ဆက်ဆံနည်း လွဲမှားသွားခဲ့ရင်တော့ သင် မိတ်ပျက်ပါပြီ- ဒါကြောင့် ဒီ ဗီဒီယိုလေးကိုသာ…
သူတစ်ပါးကို ဘယ်တော့မှ အပြစ်တင် မစောလိုက်ပါနဲ့၊ သူ့မှာ သင်မသိတဲ့ အခက်အခဲတွေ ရှိနိုင်တယ်
သူတစ်ပါးကို ဘယ်တော့မှ အပြစ်တင် မစောလိုက်ပါနဲ့၊ သူ့မှာ သင်မသိတဲ့ အခက်အခဲတွေ ရှိနိုင်တယ်။ သူတစ်ပါးကို ဘယ်တော့မှ အထင်မသေးလ်ိုက်ပါနဲ့၊ သူ့မှာ သင်မသိတဲ့ ကြီးမြတ်မှုတွေ ရှိနိုင်တယ် ။ သူတစ်ပါးကို ဘယ်တော့မှ မစွပ်စွဲလိုက်ပါနဲ့၊ သူ့မှာ သင်မသိတဲ့ အမှန်တရားတွေ ရှိနိုင်တယ် ။ သူတစ်ပါး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကို ဘယ်တော့မှ မပုတ်ခတ်လိုက်ပါနဲ့၊ သူ့မှာ သင်မသိနိုင်တဲ့ ရုန်းကန်ဖြတ်သန်းမှုတွေ ရှိနိုင်တယ်။…